Guuritaanka ka telefoonka ah oo gaboobay Android inay phone cusub Android waa had iyo jeer xiiso leh. Si kastaba ha ahaatee, ma aad ogaato sidaad u socotaan si ay u gudbiyaan xogta oo dhan telefoonka cusub? Tusaale ahaan, waxaa dhici karta badan oo ay xiriiro iyo aad laga yaabaa in aanay awoodin inay ku wareejin xiriir kasta oo si fudud. More, sidee baad u dhaqmaysaa la tan oo sawirro iyo xog ku saabsan telefoonka jir Samsung? Waxay noqon kartaa wax waqti si ay u gudbiyaan xogta oo dhan. Waxaa jira sawiro, audio, videos, fariimaha qoraalka ah, xiriirada, jadwalka taariikhda, iyo warbaahinta kale oo badan oo aad ku doonaysid in lagu wareejiyo.
Hab free caadi ah in xogta laga Samsung wareejiyo qalabka kale ee Android
In la dedejiyo geedi socodka, idinku Imtixaamo isticmaalaya software xisbiga saddexaad ee aad Phone. Waxaad sidoo kale isticmaali kartaa app xisbiga saddexaad sida Switch mobile Samsung Smart.
Waa sidan sidii aad u isticmaali kartaa Switch mobile Samsung Smart in ay sameeyaan kala-guurka,
1. Download iyo rakibi app ee suuqa. Hadda fur app. Hubi phone jir ah oo cusub labadaba waa in app furay.
2. Hadda dooro dhammaan xogta in aad rabto in lagu wareejiyo ka phone jir.
3. Haddaba tag si aad telefoon cusub oo la doorto ikhtiyaarka ah, taas oo ah android in telefoonada aad tusaale ahaan haddii uu yahay Galaxy waxaa markaas, Android ku tusi doonaa in Galaxy. Hubi in aad telefoon cusub iyo weynba waxaa lagu qorayaa wax ka badan 10 cm. U ogolow iyaga in ay ku xidhmaan kasta oo kale.
4. Marka xiran, garaac kala iibsiga telefoonka jir. Just sugi kala iibsiga si uu u dhameystiro.
Habkani waa si degdeg ah, laakiin ma qaadi khasaaraha yar, taas oo ka dhigaysa inaysan ku habboonayn isticmaalka.
App Tani waxaa ay diyaariyeen Samsung oo ka shaqeeya weyn u dhexeeya qalabka Samsung. Waxaa laga yaabaa inaad ka heli adag tahay in la isku xiro telefoonada ka duwan manufactures.
Xogta waxaa wirelessly wareejiyo, waxaa suurto gal ah in aad ku kharribeen doonaa.
Waqtiga si aad u kala iibsiga haddii size xogta waa weyn ayay ku qaadataa.
Xalka fiican - 1 click in xogta laga Samsung wareejiyo qalabka kale ee Android
Tani waa software xisbiga saddexaad ee ugu kalsoonaan karo si ay u gudbiyaan xogta aad ka Samsung in qalabka kale ee Android. Waxaa la horumariyo by Wondershare oo loo tixgeliyaa sida software ugu xaqiijisatay ujeedadaas. Halkan waxa ku jira qaababka ay:
Waa mid ka mid click software oo kaa caawin kara inaad si ay u gudbiyaan dhammaan noocyada kala duwan ee xogta ay ka mid yihiin, qoraalka, warbaahinta, xiriirada, barnaamijyadooda iyo noocyada kale ee warbaahinta ee ka mid click!
Waxa ay taageertaa dhammaan noocyada kala duwan ee OS, soo saarayaasha iyo shabakadaha. Sidaa awgeed, waxaa jira arrimo waafaqsan lahayn.
Waa software free ugu xaqiijisatay iyo khatarta ay u gudbiyaan xogta siday u isticmaasha pc sida intermediator u dhexeeya labada qalabka.
Kala iibsiga ayaa si deg-deg ah sida loo isticmaalo si xiriir USB.
Waa kuwan tallaabooyinku muujinaya sida aad ka Samsung wareejin karaan xogta si kale Android Devices
1. Download software ka site Wondershare ah. Version Trial waa lacag la'aan iyo version buuxa waxa laga iibsan karaa qiimo macquul ah. Just furo software ku saabsan pc.
2. Haddaba tag meesha buluug iyo guji Phone in ay doorasho Transfer Phone. On screen soo socota, waxaa lagu ogaan doonaa telefoonada ah. Connect labadaba telefoonada via USB. Hubi in aad telefoon jir waa isha iyo telefoonka cusub ka yar yahay meel loo ahaadana iyadaa.
3. Hadda sugi qalabka si ay u xiriiriso. Laga soo bilaabo bartamihii aad dooran kartaa content aad rabto in aad ku wareejiso. Dooro oo dhan haddii aad rabto in lagu wareejiyo oo dhan.
4. Hadda waxaad leedahay in la sameeyo oo dhan waa guji Transfer. Xogta aad All bilaaban doono helitaanka kala iibsiga. Waqtiga qaaday saxiixa waxay ku xirnaan doontaa tirada xogta.
Marka xogta la wareejiyay, kaliya saarto qalabka iyo hubi haddii dhammaan xogta lagama maarmaanka u ah ayaa loo wareejiyay. Software waa fududahay in la isticmaalo iyo in hal click, xogta kala duwan ayaa loo wareejiyay qalab cusub.
Waa kuwee qalabka Android aad u isticmaalaan US ee?
Waxaa jira dhowr saarayaasha kala duwan ee dalka Maraykanka, taas oo bixiso telefoonada Android. Ha noqoto Samsung, Google, Motorola oo dhan waxay leeyihiin taleefanada ay suuqa. Halkan waxa ku jira hogaanka toban telefoonada android ee Maraykanka:
1. Samsung Galaxy Note 4 Waxaa laga yaabaa in a phone-dhamaadka sare, laakiin waxaa hadda waa telefoonka ugu fiican ee laga heli karo suuqa.
2. Samsung Galaxy qod6 phone Tan waxaa loo yaqaan for design, camera aad u fiican, iyo farsamada casriga ah scanner faraha ammaanka.
3. LG G3 In kastoo aan sida dadku isticmaalo, sida Samsung, laakiin waa telefoonka ugu cusub oo laga heli karo ilaa taariikhda la soo bandhigay af badan oo tayo leh.
4. MotoX Motorola ee telefoonka dhamaadka sare Moto X badan oo kala duwan qiimaha ay ku siinayaa. Waxay sidoo kale soo bandhigi uga faaidaysan iyaga u gaar ah si ay telefoonka ah in ay qaadato in heerka ku xiga.
5. Samsung Galaxy S5 New version waa la heli karaa laakiin telefoonka taasi oo awood badan ayaa waxaa ay ka mid user ku meel.
6. Moto G hadal ku saabsan telefoonada miisaaniyadda bixiya-dhamaadka sare qoreysa ka keliya ee hogaaminaya waa Moto G.
7. HTC mid M9 Beauty la qaabeynta awood badan iyo software cajiib ah siinaysaa taasi phone kaalinta toddobaad ee liiska.
8. Motorola Nexus 6 Motorola manufactures xubno cusub, laakiin design weli iska leh Google oo ka mid ah kuwa telefoonada in aad siin oolin Android 5.0.
9. Samsung Galaxy Note ku laayeen ku laayeen cusub waa ku filan oo ay ku siin telefoon meel oo liiska ku jirta.
10. Sony Xperia Z Sony ayaa laga yaabaa in laga badiyay taabto ee casriga ah, laakiin waxa uu weli soo saara telefoonada weyn sida Xperia Z2.
> Resource > Android > Sida loo kala iibsiga xogta ka Samsung in Android Qalabka Kale